Sub Translate Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Salama daholo, te hijery horonan-tsary YouTube misy dikanteny amin'ny fiteny samihafa ve ianao? Raha Eny, dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana ity, izay fantatra amin'ny anarana hoe Sub Translate Apk. Io no fampiharana Android farany indrindra, izay manolotra dikanteny nadika amin'ny horonan-tsary YouTube.
YouTube dia iray amin'ireo sehatra fizarana haino aman-jery lehibe indrindra, izay manolotra ny fanangonana, vaovao, fialamboly, fampahalalana, ary horonan-tsary maro hafa. Misy mpampiasa an-tapitrisany, izay manavao ny angon-drakitra isan'andro isan'andro amin'ny lohamilina ary misy olon-kafa mijery ireo horonantsary ireo.
Na iza na iza dia afaka mahazo vaovao avy amin'ity sehatra ity, saingy matetika, ny olona dia miatrika olana amin'ny fiteny. Tsy manome afa-tsy ny fiteny, izay omen'ny mpandefa. Noho izany, manana olana ny olona, ​​izay miteny fiteny hafa, izay tsy mifandray amin'ny lahatsary.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahavariana ity, izay manolotra fiasa an-taonina izay misy dikanteny dikanteny. Izahay dia hizara ny momba an'ity fampiharana ity miaraka aminao. Ka mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny hahalala misimisy momba an'ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny Sub Translate Apk
Izy io dia fampiharana fialamboly Android, izay manolotra ny fandikana ireo horonan-tsary YouTube. Manolotra dikanteny amin'ny fiteny 110 mahery izy io, izay ahafahan'ny olona mahazo tsara kokoa ny atiny misy.
Manolotra ny atiny rehetra misy ao amin'ny YT, izay azonao adika amin'ny fiteny hafa. Tsy manome ny fandikan-teny fa manome dikanteny ambanin'ilay video. Matetika izy io dia manome dikanteny amin'ny teny Japoney sy anglisy.
Saingy, azonao atao koa ny manova azy amin'ny tanana ho lasa fiteny azo takarina. Raha te hampiasa an'ity rindranasa ity dia mila manome ny kaonty Gmail-nao ianao ary misoratra anarana miaraka aminy. Raha vantany vao vita ny fisoratana anarana dia azonao atao ny miditra amin'ny atiny tsy misy olana.
Ny Sub Translate App dia manolotra takelaka misy ny horonan-tsary rehetra misy amin'ny fironana, izay azonao alefa sy vakianao amin'ny fandikana fiteny maro. Raha tsy nahita ny atiny tianao hojerena ianao dia manolotra bara fikarohana izay ahafahanao mitady ny atiny tadiavinao.
Izy io dia hampiseho ny atiny mifandraika amin'ilay teny lakile fikarohana nataonao. Mila mahita ilay horonan-tsary lehibe tadiavinao ianao, ary afaka mijery azy ianao. Raha vao mikitika azy ianao dia hahazo takelaka hafa ahafahanao manova ny fiteny. Eo amin'ny faran'io pejy io dia misy ny bara fandikan-teny.
Azonao atao ny manova ny dikanteny amin'ny fiteny hafa. Raha swipe ankavia ny efijery dia ho azonao ny antsipiriany rehetra momba ny horonan-tsary amin'izao fotoana izao. Raha toa ka tsy azonao ny teny ao amin'ny dikanteny dia azonao atao koa ny manindry azy indroa. Ny paompy indroa dia hanome anao ny dikan'io teny na fehezanteny io.
Tsy safidy hafa amin'ny YT izany. Manolotra ny angon-drakitra rehetra avy amin'ny YT izy io, izay ahitana ny marika, marika rano ary ny hafa. Fitaovana tsotra fotsiny izy io, izay ahafahan'ny olona mahazo traikefa mora ampiasaina. Noho izany, midira ary mahazo ny tombontsoa maimaim-poana rehetra.
anarana Sub Translate
Anaran'ny fonosana asia.zsoft.subtranslate
Misy endri-javatra an-taonina ao amin'ity fampiharana ity. Ny sasany amin'izy ireo dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa hizara ny sasany amin'ireo fiasa lehibe ao amin'ny lisitra eto ambany izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Lisitry ny endri-javatra lehibe
Hita amin'ny horonan-tsary YouTube rehetra
Subtitle amin'ny fiteny mihoatra ny 110
Safidy fizarana horonantsary
Mitadiava horonan-tsary haingana kokoa sy marina kokoa
Fanaraha-maso ny fanazavana
Fanaraha-maso ny horonan-tsary eo am-pamakiana dikanteny
Safidy ankafizina misy
Noho ny antony tsy fantatra dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store izy io. Ka hizara an'ity app ity aminao izahay rehetra. Azonao atao ny misintona an'ity fampiharana ity, amin'ity pejy ity. Ny bokotra fampidinana dia azo jerena ambony sy ambany. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
Sub Translate Apk no fampiharana fialamboly tsara indrindra, hijerena horonan-tsary YT hafa misy dikanteny azo takarina. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary ankafizo ireo fiasa rehetra ananany. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Tools Tags Sub Translate, Sub Translate Apk, Sub Translate App Post Fikarohana